Erasmus MC wuxuu baarayaa saamaynta xashiishadda ee kansarka • Dawooyinka Inc.eu
Wax yar baa laga ogyahay saamaynta xashiishku ku leeyahay burooyinka. Waxaan ka qornay maqaal ku saabsan tan hore. Haddana waxaa jira caddaymo badan oo sheeko xambaarsan. Si loo soo ururiyo caddeynta sayniska, Erasmus MC wuxuu baaritaan ku sameyn doonaa xashiishka oo daawo ka ah kansarka.
Aasaaska Olga van Harmelen ee 'Embrace Life Foundation' ayaa door weyn ka ciyaara tan. Buro maskaxeed naadir ah ayaa sanadihii la soo dhaafay laga helay. Olga waxay isku dayday saliida xashiishadda daawo ahaan. Iyo guul! Tan iyo markii ay isticmaashay waxay awood u yeelatay inay joojiso dawooyinka kale ee culus sida tramadol iyo prednisone oo burokeedu mar dambe ma kori. Wax walba way taagan yihiin madaxayguna waa xasilloon yahay.
Hay'adda 'Embrace Life foundation' waxay lacag u uruurineysaa cilmi baarista. Baadhitaanku wuxuu bilaabmay 8 Maarso. Ujeeddadu waa in la baaro saameynta ay isku-darka xashiishku ku leeyihiin unugyada burooyinka maskaxda. Neurosurgeon Sieger Leenstra ayaa hogaaminaya baaritaanka.
Daraasad cilmiyeed ayaa lagama maarmaan u ah aqbalida
Sida laga soo xigtay Leenstra, cilmi-baaristani waxay ka kooban tahay laba qaybood: “Waxaannu eegaynaa saamaynta xashiishku ku leeyahay unugyada burooyinka, laakiin sidoo kale inay saameyn xoog leh ku yeelanayso shucaaca iyo kiimikada. Sidaas ayaanu ku horumarin karnaa heerka daaweynta. " Olga waxay rajeyneysaa in cilmi baarista ay saameyn ku yeelan doonto siyaasada hada jirta. Hadafka ugu sareeya ayaa ah inuu noqdo qaab daaweyn rasmi ah isla markaana ay dib u soo celiyaan ceymiska caafimaadka. Tani waxay sidoo kale siinaysaa qof walba inuu si fudud u helo xashiishad caafimaad.
Weli waxaa jira tabooyin badan oo la jebin doono. Xashiishadda Cannabis looguma talagalin oo keliya tan sare iyo madaddaalada waxay leedahay awood badan oo dheeri ah. Waxaa muhiim ah in tan si ballaaran loo taageero loona caddeeyo cadeymo cilmiyeed.
Akhri wax dheeraad ah rijnmond.nl (Xigasho, NE)
City of Trust: Xakamaynta XTC?
Sidee u noqon doonaa siyaasadda daroogada ee mustaqbalka? Way fududahay: halka baahida jirto, saad ayaa jirta.
Rinus beeraha Rinus wuxuu rabaa inuu ka baxo sharci darada: 'Dowlada ayaa iga soo horjeedo'
Hadda wuxuu soo saaraa oo ku iibiyaa saliidiisa xashiishka miiska hoostiisa, laakiin beerlaha Rinus Beintema ma doonayo wax ...
La wadaag Aurora Cannabis marka lagu daro maadaama Biden uu ku hanjabayo inuu ku guuleysan doono doorashooyinka
Waxay umuuqataa inuu jiro xiriir cad oo udhaxeeya kororka saamiyada Canadian ...